Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पश्चिम बंगालको चुनावी हिंसामा ५ को मृत्यु – Emountain TV
पश्चिम बंगालको चुनावी हिंसामा ५ को मृत्यु
भारतको पश्चिम बंगलमा चुनाव सम्पन्न –
एजेन्सी, ३१ वैशाख । भारतको पश्चिम बंगालमा सोमवार भएको पञ्चायत चुनाव हिंसात्मक बन्योे । निर्वाचनका क्रममा ठाउँठाउँमा बम विष्फाट भयो भने ब्यालेट बक्स लुट्ने र आजगनी गर्ने काम भयो । साथै, तोडफोडको क्रममा ५ जनाको मृत्यु हुनुको साथै दर्जनौ घाइते भए ।
भारतको पश्चिम बंगालमा सोमबार भएको पञ्चायत चुनावका क्रममा बम विष्फोट, तोडफोड र आजगनी भएपछि मतदाताले भय र असुरक्षाकाबीच मतदान गरे । सन् २०१९ मा हुने आम निर्वाचन भन्दा पहिले भएको पञ्चायतको निर्वाचनलाई भारतका राजनीतिक दलहरुले प्रतिष्ठाको बिषय बनाइ बढी सिट कब्जा गर्ने होडबाजीमा उत्रदा अप्रिय घटना भएको हो ।
पश्चिम बंगालको कुच बिहारमा दुई गुटबीच भएको झडपमा दुई दर्जन जती घाइते भएका छन् । तृणमूल पार्टीका कार्यकर्ताहरुले बुथ कब्जा गरेको आरोप छ । दक्षिण चौबिस परगनाको भांगर भन्ने स्थानमा संचारकर्मीको क्यामेरा तोडफोड गरी गाडीमा आगो लगाइएको छ ।
यसअघि एकजना सीपिएमको कार्यकर्ताको घरमा चुनावको अघिल्लो दिन आगो लगाएपछि ती कार्यकर्ताकी पत्नीको जलेर मृत्यु भएको छ । सीपिएम पार्टीले यो घटनामा टीएमसी पार्टीका कार्यकर्ताहरुको हात भएको आरोप लगाएको छ । बिलकाँडामा भाजपा समर्थक एक कार्यकर्तामाथि टीएमसीका कार्यकर्ताले चक्कू प्रहार गर्दा उनी गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ ।
कुच बिहारमै दिनाहाटमा बम बिष्फोट हुँदा एक जना टीएमसी कार्यकर्ताले हात गुमाएका छन । यसैगरी चौबिस परगना आमगाडामा भोट दिन गइरहेका एक भाजपा कार्यकर्तालाई बम प्रहार गरी हत्या गरिएको छ । यस्तै चौबिस परगनाको कुलताम्लीमा तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्तालाई गोली हानी हत्या गरिएको छ ।
उता नयाँ दिल्लीको शान्तिपुरमा एक जना तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्ताको शव फेला परेको जनाइएको छ । पश्चिम बंगालको यो चुनावमा तृणमूल र काँग्रेसपार्टीबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपी यी दुई पार्टीको पछिपछि भाजपा, सीपिएम र सीपिआइले सिट जित्ने आंकलन गरिएको छ ।
५८ हजार ६ सय ९२ सीटका लागि भएको निर्वाचनमा २० हजार ७६ सिटमा निर्विरोध भएको छ । यद्यपी भारतको सर्वाेच्च अदालतले निर्विरोध निर्वाचित भएका उम्मेद्वारहरुलाई प्रमाणपत्र नदिन आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचनको परिणाम १७ मे अर्थात बिहिबार घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
श्रीलंकाका अपदस्थ प्रधानमन्त्री सिंङघे पुनर्वहाली
अमेरिकी फौजद्वारा लुटिएका घण्ट ११७ वर्षपछि फिर्ता
श्रीलंकामा राजनीतिक संकट समाधानतर्फ उन्मुख
राजापाक्षेले किन दिए प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा ?
मारम्मा मन्दिर: प्रसाद खाँदा ११ जनाको मृत्यु, ७० भन्दा बढी विरामी, ११ जनाको अबस्था गम्भीर
अफ्रिकी बर्ष खेलाडीको अवार्ड सलाहलाई, लगातार दुई बर्ष अवार्ड जित्न सफल
अमेरिकामा पनि असुरक्षित, आफन्त गुमाएका परिवारको विचल्ली
सूर्यलाई छुने मिसनमा गएको अन्तरिक्ष यान पार्कर सोलार प्रोबले पृथ्वीमा जानकारी पठाउन सुरु (फोटोफिचर)
टर्कीमा रेल दुर्घटना हुँदा चारको मृत्यु ४० घाइते
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मेद्वारा अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा जित हासिल
विधानसभा निर्वाचनमा भाजपालाई नराम्रो धक्का